You are at:Home»2014»December (Page 7)
ယနေ့ ၁-၁၂-၁၄ ရက်နေ့ တွင် AAPP-JHU- USAID တို့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော CETA ၏ Dissemi…
ယနေ့ ၁-၁၂-၁၄ ရက်နေ့ တွင် AAPP-JHU- USAID တို့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော
CETA ၏ Dissemination of Findings Meeting ကို ရန်ကုန်မြို့ ဖိုးစိန်လမ်းရှိ Green Hill Hotel
တွင် နံနက် ၉နာရီမှစတင်၍ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ကိုကိုကြီး(၈၈ ငြိမ်း/ပွင့်)၊ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း နှင့် US Embassy မှ လက်ထောက်သံအမတ်တို့ Mrs.Virginia Murray မှအဖွင့်စကားပြောကြားခဲ့သည်။ ၄င်းနောက်တွင် အေအေပီပီ(MHAP) မှ Chief Supervisor ကိုကျော်စိုးဝင်း နှင့် JHU မှ Cate တို့မှ အေအေပီပီနှင့် JHU တို့ လက်တွဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော MHAP လုပ်ငန်းများအကြောင်းကိုအကျယ်တဝံ့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး တက်ရောက်သူများမှ သိလိုသည်များကိုပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးကို အမေရိကန်သံရုံးတာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့၊ ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်း၊ AJAR တို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် GP က ဒေါက်တာမြင့်ဦးနှင့် အခြားဖိတ်ကြားထားသူများ ၄၅ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၁ရက်မှ ၂ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
Common Elements Treatment Approach (CETA) Project Dissemination o
မျိုးစောင့် ဥပဒေကြမ်းလေးခု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းလိုက်ပြီ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ မျ…
မျိုးစောင့် ဥပဒေကြမ်းလေးခု လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းလိုက်ပြီ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ မျိုးစောင့် ဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အပါအဝင် ဥပဒေကြမ်း လေးခုကို နိုဝင်ဘာလ…
ကုထုံးများကိုအခြေခံသောကုသနည်းဆိုင်ရာ ကောင်းဆဲလင်းဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၄င်း ကုထုံးအား တိုးချဲ့ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းများကို ဆွေးနွေးနိုင်ရန်နှင့် ပိုမို သိရှိသင်ယူနိုင်ရန်အတွက် (၂) ရက်တာမျှ ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးအား တက်ရောက်ပါရန် လူကြီးမင်းအား နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ကြားလိုပါသည်။
တောင်ငူမြို့မှာ အမျိုးသားပညာရေး ဥပေဒကုို ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ဗမာနုိုင်ငံလုံးဆုိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်က ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၆ ယောက်ကုို[…] The post ပညာရေးဥပဒေ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်…
AAPP | Assistance Association for Political Prisoners (Burma) » Blog Archive » Invitation to…
You are warmly invited to attenda2-­‐day meeting to learn more about the evidence-­‐based counseling program, Common Elements Treatment Approach, and discuss the use and expansion of this therapy in Myanmar.
/0-‘&*-#& 1220(’34 5)+/16 70(8-3& 9%..-*%#’&%(# (: ;%#<%#=. >–&%#= !”#”$%&'(%!)”*+,–$+o5ooq_tcooqto !”#$%&'()*+,)-./-.”0+12!!”#$%”#&!”#$%!”&$’!!!”#!”#$%&'()*+$( You aie waimly inviteu to attenua2-uay meeting to leain moie about the eviuence-baseu counseling piogiam, Common Elements Tieatment Ap…
Free Burma Info's Facebook Wall 2014-12-01 06:16:53
ဥပဒေကြမ်း (၄) ခု လွှတ်တော် ရောက်ပြီ———————————————(၁) ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း(ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည်)(၂) လူဦးရေတိုးပွားနှုန်း ထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဥပဒေကြမ်း(ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည်)(၃) မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိန်းမများ အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း၊(ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည်)(၄) တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း၊(ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည်)ပြည်သူအများ သိရှိလေ့လာအကြံပြုနိုင်ရန် ယနေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ တွင် ဖော်ပြထားသော “ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း”Ref : Hmuu Zaw